Akụkọ - Ndị na-akwado BTS India na-ebuli ngwa ngwa ego iji luso mba na-eto eto ọgụ
Ndị na-akwado BTS India na-ebuli ngwa ngwa ego iji luso uto obodo ọgụ
N'ime ọgba aghara coronavirus nke India na-eto eto, ndị na-akwado BTS mere ihe iji nweta ego iji nyere ndị nọ na mkpa aka.
N'izu gara aga, enyemaka enyemaka nke Covid-19 nke otu ndị otu BTS na-akwado klọb a maara dị ka Army chịkọtara ihe karịrị nde rupee abụọ (US $ 29,000).
Achikọtara na saịtị igwe mmadụ ndị India Milaap, akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta a maara dị ka "Covid Relief India site na BTS Army" welitere ihe karịrị nde rupee abụọ n'ime awa 24, yana ndị na-akwado 2,465 na-enye onyinye.
Ị nwere ajụjụ gbasara nnukwu isiokwu na usoro sitere na gburugburu ụwa?Nweta azịza ya na Ọmụma SCMP, ikpo okwu ọhụrụ anyị nke echekwabara na ndị nkọwa, FAQ, nyocha na ozi ndị otu anyị nwetara ihe nrite wetara gị.
Onye nkwado ahụ bịara n'oge ọgba aghara ọrịa coronavirus nke abụọ nke mba ahụ, yana ikpe na ọnwụ na-enwetụbeghị ụdị ya ka India na-eche nsogbu ahụike kpatara na akụkụ nke enweghị ọgwụ - gụnyere enweghị oxygen - yana ụdị nje ọhụrụ.
Mgbalị ọrụ ebere ndị agha lekwasịrị anya n'ụzọ bụ isi n'inye oxygen na ọgwụ ndị ọzọ, yana nri nye ndị nọ na mkpa.Mgbasa ozi ahụ butere Maharashtra na Delhi ụzọ, ebe ọnọdụ gbasara ọrịa a dị ize ndụ.
Dabere na onye na-ahụ maka Covid-19 sitere na Mahadum Johns Hopkins, dị ka n'ụtụtụ Mọnde, India enweela ngụkọta nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 17, na-anwụ ihe karịrị 192,000.N'ime izu gara aga, India akọpụtala ihe karịrị nnwale 300,000 dị mma kwa ụbọchị;enwere ọtụtụ nchegbu na a na-akọkarị ọrịa.
Ndị ọrịa coronavirus India na-ata ahụhụ n'ihi ụkọ oxygenỌtụtụ mba ekwupụtala na ha ga-enye enyemaka, mana ikike ikike na-egbochi India na mba ndị ọzọ iwepụta ọgwụ mgbochi zuru oke iji gwọọ ndị bi na ya.
Akụkọ ndị ọzọ sitere na SCMP
Mgbanwe na usoro ntuli aka Hong Kong ka na-ere ahịa siri ikeNa Cambodia, ịgbatị mkpọchi Phnom Penh coronavirus na-ahapụ ndị ọrụ uwe, agụụ na-agụ ndị na-ere ahịaKpakpando Korea 8 'kagburu' mgbe asịrị: Achụpụrụ Seo Ye-ji na K-drama Island, ebe Ji Soo hapụrụ Osimiri Mgbe ọnwa na-ebili - enwere ike gbaa akwụkwọ maka nde US $ 2.7Esemokwu dị n'ókè China na India: nchụpụ New Delhi na ọdọ mmiri Pangong Tso bụ mmejọ?
N'ime esemokwu US na China, Eshia ga-agbakọta ọnụ iji weghachi ọdịnihu ya
Edemede a pụtara na South China Morning Post (www.scmp.com), mgbasa ozi mgbasa ozi na-eduga na China na Eshia.
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị - AMP Mobile Ihe mkpuchi ịwa ahụ nke ụlọ ahịa ọgwụ, Ihe mkpuchi China, Ihe mkpuchi mkpuchi China, Igwe iku ume FFP2, Ihe mkpuchi ihu, Ihe mkpuchi PPE,